Levitikosy 6 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
6 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 2 “Raha misy olona* manota, izany hoe tsy mendri-pitokisana eo anatrehan’i Jehovah,+ ka mamitaka+ ny namany momba ny zavatra nampiandraiketina azy na napetraka tany aminy+ na nangalariny, na koa manambaka ny namany,+ 3 na mahita zavatra very+ ka mandainga momba izany, na mianiana lainga+ momba ny iray amin’ny fahotana rehetra mety hataony, 4 eny, raha manota izy ka meloka,+ dia hamerina an’ilay zavatra nangalariny na nalainy tamin’ny fanambakana, na nampiandraiketina azy, na ilay zavatra very ka hitany, 5 na izay zavatra rehetra nianianany lainga. Honerany+ manontolo izany, sady mbola hampiany ampahadiminy. Ny tompon’ilay zavatra no homeny izany, amin’ny andro ahitana fa meloka izy. 6 Ary haka ondrilahy tsy misy kilema+ sady araka ny tombam-bidy takin’ny mpisorona izy, ka hitondra izany ho an’i Jehovah ho fanatitra noho ny heloka,+ ary hanatitra izany any amin’ny mpisorona. 7 Ary ny mpisorona handrakotra+ ny fahotan’ilay olona, eo anatrehan’i Jehovah, ka havela ny helony, na inona na inona mety ho nataony ka nahameloka azy.” 8 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 9 “Izao didy izao no holazainao amin’i Arona sy ny zanany lahy: ‘Izao no lalàna momba ny fanatitra dorana:+ Hatao eo amin’ny fitoeran’afo eo ambony alitara izany, mandritra ny alina ka mandra-maraina. Ary harehitra eo ny afon’ny alitara. 10 Ary ny mpisorona hanao akanjo fisoronana vita amin’ny lamba rongony,+ sy kilaoty lava+ vita amin’ny lamba rongony, hanaronana ny fitanjahany. Dia hesoriny ny lavenona feno menaka+ avy amin’ny fanatitra dorana, izay levonin’ny afo eo ambony alitara, ka hataony eo anilan’ny alitara. 11 Ary hesoriny ny fitafiany+ ka hosoloany hafa. Dia havoakany ho eny amin’ny toerana madio, eny ivelan’ny toby, ny lavenona feno menaka.+ 12 Havela hirehitra eo ambony alitara ny afo, fa tsy tokony ho faty. Dia handrehitra kitay+ eo isa-maraina ny mpisorona, sady handahatra ny fanatitra dorana eo ambony afo. Ary hodorany ny tavin’ny sorona iombonana mba hidona-tsetroka.+ 13 Havela hirehitra foana eo ambony alitara ny afo,+ fa tsy tokony ho faty. 14 “‘Izao no lalàna momba ny fanatitra varimbazaha:+ Atolory eo anatrehan’i Jehovah eo anoloan’ny alitara izany, ry zanakalahin’i Arona. 15 Ary ny iray amin’izy ireo dia haka eran-tanan’ila amin’ny fanatitra varimbazaha, izany hoe amin’ny lafarinina tsara toto sy ny menaka ary ny ditin-kazo manitra rehetra izay eo ambonin’ilay fanatitra. Ary hodorany eo ambony alitara ireo mba hidona-tsetroka ho hanitra mampitony, eny, ho fanatitra fampahatsiahivana+ an’i Jehovah. 16 Ary hohanin’i Arona sy ny zanany lahy ao amin’ny toerana masina ny ambin’ilay fanatitra,+ izay hamboarina ho mofo tsy misy lalivay.+ Eo an-tokotanin’ny tranolay fihaonana no hihinanany azy. 17 Tsy tokony hasiana zavatra misy lalivay izany rehefa hatao ao anaty lafaoro.+ Omeko azy ireo izany ho anjarany avy amin’ny fanatitra atao anaty afo+ aterina ho ahy. Zavatra masina indrindra izany,+ toy ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra noho ny heloka. 18 Ny lahy+ rehetra taranak’i Arona no hihinana izany. Ho anjarany mandritra ny fotoana tsy voafetra,+ hatramin’ny taranakareo fara mandimby izany, avy amin’ny fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah. Ho masina ny zava-drehetra mikasika an’ireny.’” 19 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 20 “Izao no fanatitra+ hatolotr’i Arona sy ny zanany lahy ho an’i Jehovah amin’ny andro anosorana+ an’i Arona ho mpisorona: Lafarinina tsara toto ampahafolon’ny efaha,+ ho fanatitra varimbazaha+ atolotra tsy tapaka, ka ny antsasany maraina ary ny antsasany hariva. 21 Andrahoina ao anaty lasitra ilay izy rehefa avy nasiana menaka.+ Efa nafangaro tsara ilay izy vao hoentinao. Mofo efa voatapatapaka no mofon’ny fanatitra varimbazaha hatolotrao ho hanitra mampitony an’i Jehovah. 22 Ny mpisorona, izany hoe izay zanany voahosotra handimby azy,+ no hanao izany. Ary izao no fitsipika mandritra ny fotoana tsy voafetra: Ho fanatitra dorana manontolo izany,+ ka hodorana mba hidona-tsetroka ho an’i Jehovah. 23 Tokony ho fanatitra dorana manontolo ny fanatitra varimbazaha rehetra atolotry ny mpisorona,+ fa tsy tokony hohanina.” 24 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 25 “Lazao amin’i Arona sy ny zanany lahy hoe: ‘Izao no lalàna momba ny fanatitra noho ny ota:+ Eo amin’ny toerana+ famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana eo anatrehan’i Jehovah ny fanatitra noho ny ota. Zavatra masina indrindra izany.+ 26 Ilay mpisorona manolotra izany noho ny ota no hihinana izany,+ ao amin’ny toerana masina,+ eo an-tokotanin’ny+ tranolay fihaonana. 27 “‘Ho masina ny zava-drehetra mikasika ny hena atao fanatitra.+ Ary raha misy akanjo ipitihan’ny ran’ilay fanatitra,+ dia hosasanao ao amin’ny toerana masina ilay akanjo.+ 28 Hopotipotehina ny vilany tany+ nandrahoana ny hena, fa raha vilany varahina kosa izany, dia hokikisana ary hokobanina amin’ny rano. 29 “‘Ny lahy rehetra, izay mpisorona, no hihinana ilay fanatitra.+ Zavatra masina indrindra izany.+ 30 Tsy tokony hohanina anefa ny fanatitra noho ny ota, izay nakana ra+ hoentina ao amin’ny tranolay fihaonana, mba handrakofam-pahotana ao amin’ny toerana masina. Hodorana kosa ilay fanatitra.